Klaasị Kọntaktị Nkuzi! Thor Schrock Nsogbu Ntanetị Gurus
Thor Schrock nwere nsogbu ịre ahịa ịntanetị Gurus? Inye $ 1,800 na Cash na Nrite
Saturday, December 8, 2007 Sunday, October 4, 2015 Ọnye na -bụ Thor Schrock
**Welie isi elu**
Gụọ na njedebe maka ohere iji merie $ 1,000 CASH!
Doug na otutu n'ime unu kwadoro m na ihe omimi nke Intanet bu ihe ozo, ma obu ezie na m bu onye nke abuo, enwere m ohere di egwu imuta site na ntaneti ahia ahia di omimi Klas nke nzuzo.
Abụkwara m ezigbo nwa akwụkwọ. Ọ dị mma n'eziokwu na m na-akpọku mmadụ abụọ n'ime ndị nkuzi nkụzi guru m mbụ, Marlon Sanders na Armand Morin n'ọhịa na Joel Comm's Nzuzo Mgbakwunye Mgbakwunye Mmemme!
Nke a bụ ihe m mụtara na otu m si eti ụfọdụ n'ime ndị na-ere ahịa ịntanetị kachasị mma n'ụwa.
Bụrụ onye Ninja na-ere ahịa, ọ bụghị ahịa ahịa.
Marlon Sanders kụziiri m tiori ahụ n'azụ ihe m maara nke ọma n'oge gara aga. O kwuru na ike ọ bụla nwere adịghị ike na-eso ya. Ọ bụrụ na ị na-emegide onye asọmpi ka elu, ịkwesighi ibuso ike ha ọgụ. Youchọrọ ịlụso adịghị ike nke ike ha ọgụ.
Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-aga megide Best Buy na-anwa ire kọmputa, emeghela nnukwu ụlọ ahịa na-ere ahịa na ndị ọrụ nkwado na-arụ ọrụ na oke nhọrọ nke PC
Kama ree komputa di elu nke emebere maka ihe onye oru choro ma nye gi oru mmeri na nkwado iji kwado ya. Site na ịwakpo adịghị ike dị n'ime ike ha, ị na-eleghara uru asọmpi Best Buy anya.
More Broke are bụ Mma gị Image kwesịrị ịbụ
Saịtị dị ka Amazon, ma ọ bụ Google, ma ọ bụ Youtube bụ ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ ọtụtụ nde dollar na logos nke ndị ọbịa na-amata ma ndị mmadụ tụkwasịrị ha obi.
Armand Morin kọwaara m na enweghị ihe ọghọm n'eziokwu ị nwere ike iji anya nke uche hụ logos nke ụlọ ọrụ ọ bụla dị n'elu n'uche gị ugbu a.
N'ihi ya, mgbe otu n'ime weebụsaịtị ndị a chọrọ ka ị mee ihe, ma ọ bụ ịzụ akwụkwọ ma ọ bụ na-ebudata vidiyo, ị nwere ike ịme ihe ahụ n'ihi na ị tụkwasịrị obi na ị tụkwasịrị aha na akara ahụ obi.
Ihe kachasị efu ị na-azụ na azụmaahịa bụ inweta onye ahịa oge izizi. Secondary ahịa otu ahịa kwesịrị a cakewalk ma ọ bụrụ na ị na-ewere nke ọma na gị ahịa na-amata gị oge ọzọ ị na-akụ aka.
Y’oburu na foto bu okwu 1,000, Gini ka Vidiyo Bara Uru?
Iji vidiyo na-ebugharị okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị bụ ụdị nka, ma ọ bụrụ na ị mara ya, ị ga-enwe ngwa ọrụ dị oke ọnụ nke ọtụtụ mmadụ na-eleghara anya.
Onye ọ bụla nwere ike biputere backlink na sekọnd ole na ole. Ọ bụghị biggie ịbanye na Google Search. Mana iwere vidiyo were obere oge na ụfọdụ onyinye. Imirikiti ndị mmadụ amaghị ka esi esi vidiyo na-anya ụgbọ ala, yabụ na ha anaghị etinye ya nsogbu na ya.
Mike Koenigs Mike kụziiri m otu esi emepụta vidiyo, nweta ya n'ihu nku anya, wee nweta eyeballs ndị ahụ na weebụsaịtị. Ọ kụziiri m otu esi eji vidiyo na-anya ụgbọ ala dịka igwe nyocha na-eme, nke a bụ nnukwu akụrụngwa nke mere ka m karịa ndị ọzọ na-ere ahịa guru.
Ọ kọwara na ndị mmadụ ga-anabata video ọjọọ ruo n’otu isi, mana ọ bụrụ na ọdịyo gị adịghị mma, ịgaghị agabiga na nke mbụ 2 sekọnd. Ọ bụrụ n’ịga etinye ego na ngwa ọrụ, buru ụzọ zụta ezigbo igwe okwu, wee nweta igwefoto dị mma.
Mgbe ahụ enwere $ 30 ga-enwe ọkụ ọkụ ị nwere ike ịme site na ngwongwo na Home Depot nke ga-enwu vidiyo gị niile. Ihe omuma di egwu kariri nke gha eme ka vidio gi di egwu ma nye gi onu banyere ndi ozo ndi tufuru vidio na ntaneti.
Ogologo ọdụ bụ Blogger's Best Traffic Friend
Dave Taylor kọwara na ọ bụrụ na iji ọdịnaya ndị mmadụ chọrọ rụọ ozi nke ọma, ị ga-aghọrọ ntakịrị okporo ụzọ na post ahụ ruo mgbe ebighị ebi ka ndị mmadụ na-achọ ihe ha chọrọ.
N'ikpeazụ, ogologo ọdụ nke ịde blọgụ ga-eweta ọtụtụ obere okporo ụzọ na-agbakwunye otu ọnụnọ weebụ dị ike.
Can nwere ike ịchọ ihe ọ bụla dị n'ịntanetị ma chọta otu n'ime ibe Dave Taylor na nsonaazụ ya.
Symphony nke Guru Butt-Kicking
Kama ịnara usoro onye guru naanị, m jikọtara ọtụtụ ụzọ site na klaasị nzuzo iji mepụta igwe ahịa nke dị ike karịa ndị nkuzi m niile.
Amalitere m na weebụsaịtị atọ edeputara iji kwalite otu ngwaahịa ahụ. Ebe nrụọrụ ndị ọzọ pụtara ohere ndị ọzọ iji kwuo ntụpọ na nsonaazụ ọchụchọ 10 kacha elu ma mee ka saịtị ndị ọzọ gbadata.
Emere m ngwa ngwa iji wepụta saịtị m tupu e bido ya, na www.extinternetmillionairedvd.com bụ flagship websaịtị m.
Gbaso ndụmọdụ Marlon, ọ dị m mkpa ịwakpo adịghị ike na klaasị klaasị nzuzo. Kama ị na-egwu otu ihe ahụ? M debere kuki na PC gị? egwuregwu Ntuziaka, wakpoo klas nzuzo na ọnụahịa site na ịkwụghachi ego.
Joel na-enye a $ 200 Mgbakwunye ọrụ maka ọ bụla Secret Classroom m na-ere, n'ihi ya, m nyere $ 100 nkwụghachi ụgwọ maka onye ọ bụla na-azụta site na ebe nrụọrụ weebụ m. M pụtara kpọrọ ihe, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-azụta na set na agbanyeghị, gịnị ma ịzọpụta $ 100, nri?
Ozugbo m matara na aha DVD ahụ ga-abụ klas Nzuzo, ejiri m usoro SEO / SEM bụ isi were jide nọmba # 2 na Google maka weebụsaịtị m na-esote intaneti ọzọ.
Ọzọ m goro coder iji mee m ụdị ntinye akwụkwọ email nke nyere m ohere ịnakọta aha na adreesị email na weebụsaịtị wee chekwaa ha na nchekwa data. Ejisiri m chịkọta ihe karịrị mmadụ 170 ndị nwere mmasị na onyinye ego a.
M mepụtara 12 Secret Classroom sample vidiyo (1 maka onye nkuzi ọ bụla) emere site na vidiyo vidiyo na ọdịyo site na nsonye Internet Next Millionaire. Ejiri m usoro Mike dee aha, nkọwa, URL na ala nke atọ nke ga-arụ. M bugoro ndị ahụ na saịtị ọ bụla na-ekerịta vidiyo na mbara ụwa.
Emechara m jide ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntụpọ kachasị elu na Google, Yahoo, na Youtube vidiyo na-achọ okwu klaasị nzuzo. Ọzọ, oge eruola ịwakpo Blog Search.
Amalitere m ịde blọgụ m ọtụtụ ugboro n'ụbọchị site na iji ndụmọdụ ọdụ ogologo nke Dave Taylor. Mgbe asọmpi m na-egwu agha kuki na-anya ụgbọ okporo ụzọ site na njikọ njikọ ha, ana m achịkọta adreesị email na mmekọrịta mmekọrịta.
Ekem ke December 5 Joel ama osio se iditịbede. M email gbawara m ndepụta, bipụtara a blog post, enịm a Google Adwords mgbasa, na uploaded m post-igba egbe ọdịda peeji.
Mgbe ájá biri, Abụ m Joel # 1 mgbakwunye mgbe ụbọchị 1. M na-ụzọ n'ihu Marlon Sanders nakwa Armand Morin? ndi ezigbo onye kuziri m na Classroom. Ha ka nwere ike ịgbakọ iji chụkwute m, mana nke ahụ bụ ebe oge 2 na-abata!
Achọrọ m ka ị nyere m aka rụchaa ọrụ ahụ ma gosipụta na nchikota nke nkuzi Nkuzi Nkuzi dị ike karịa oge nke ọ bụla.
Ana m agba ọsọ a zoo na blog m na ihe karịrị $ 1,800 na ego na onyinye maka ijide. Ihe niile ị ga - eme iji nwee mmeri na mmeri bụ ịme ọkwa, kwuo okwu, ma tinye njikọ blogroll.
Lelee asọmpi ahụ ma mee ka m mara ihe ị chere. M ga-edebe Doug na otu m si eme, mana ebumnuche m bụ ịrụcha ọrụ m malitere na Colorado na August, n'oge a echere m na Joel ga-achọpụta.
N'okpuru onye ndu Thor, a họpụtara Schrock Innovations Computer Company ka ụlọ ọrụ nrụzi kọmputa nọọrọ onwe ya na Lincoln # 1 kwa afọ kemgbe 2001 n'ahịa nwere ọtụtụ ndị asọmpi na-eme ihe ike. Thor toro Schrock Innovation site na njedebe nke enweghị ego na 2004 n'ime ụlọ ọrụ ike $ 1.5 kwa afọ na 2009 yana ọnọdụ dị na Omaha na Lincoln, NE.
Jun 26, 2008 na 12:27 AM
$ 200.00? Ọ bụ na nke ahụ adịghị ka otu $ 1500 ma ị nọghị n’ihe nkiri ahụ n’onwe ya? Ouch.